Delta dia mandefa sidina tsy miato avy any JFK any New York mankany Grand Cayman
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Delta dia mandefa sidina tsy miato avy any JFK any New York mankany Grand Cayman
Janoary 24, 2020
Delta Air Lines dia hanampy sidina fizaran-taona vaovao eo anelanelan'ny Grand Cayman sy New York, NY, manomboka ny 13 Jona 2020. Ny sidina dia miasa ny sabotsy hatramin'ny 20 aogositra 2020, eo anelanelan'ny Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena John F. Kennedy (JFK) ary ny Grand Cayman izay vao nohavaozina Owen Roberts International Airport (GCM).
"Faly izahay mandray ny fiakaran'ny fiaramanidina mitombo avy any New York City ka hatrany Grand Cayman amin'ity fahavaratra ity, indrindra miaraka amin'ny mpiara-miasa iraisam-pirenena efa ela toa ny Delta Air Lines izay manana tambajotram-be mpandeha ao amin'ny faritra tristate," hoy i Hon. Minisitry ny fizahan-tany, Andriamatoa Moses Kirkconnell. “Miaraka amin'ny serivisy vaovao an'ny vanim-potoana Delta sy ny fampiroboroboana ny fizahan-tany isan-taona an'ny Departemantan'ny Fizahantany, dia vonona izahay hanome bebe kokoa ireo olona ao New York ho mora tadidy sy mora azo Cayman Islands fialan-tsasatra amin'ity fahavaratra ity. ”
"Delta no kaompaniam-piaramanidina laharana faha-1 ao New York, ary ity serivisy ho an'ny Nosy Cayman ity dia tafiditra amin'ny laharam-pahamindrana mihoatra ny 200 isan'andro mankany amin'ny toerana 80 mihoatra ny firenena 30," hoy i Chuck Imhof, filoha lefitra Delta - New York Sales. “Ny fianakaviana sy ny mpanao vakansy mitady ny fandosirana avy amin'ny tanàna lehibe amin'ity fahavaratra ity dia hahita ny traikefa nahafinaritra amin'ity fialan-tsasatry ny nosy manan-karena ity.”
New York-JFK mankany Grand Cayman
Fiaingana 10:55 maraina
Fahatongavana 1:37 hariva
Grand Cayman mankany New York-JFK
Fiaingana 2:50 hariva
Fahatongavana 7:28 hariva
"Ny sidina vaovao nampidirina tao Grand Cayman dia manome mpitsidika safidy bebe kokoa hijerena ny toerana tsara halehantsika sady hamorona tombam-pizahantany sy raharaham-barotra fanampiny eo amin'ireo mpiara-miombon'antoka fiaramanidina sarobidy amintsika," hoy Ramatoa Rosa Harris, talen'ny fizahan-tany. "Misaotra an'i Delta izahay noho ny nanohizany nanompo sy nanambola tao amin'ny Nosy Cayman, ary manantena ny hitondra mpandeha bebe kokoa hatrany amin'ny faritra tristate hiaina ny volon'ny masoandro, fasika, ranomasina ary Caymankind amin'iny fahavaratra iny."
Fialan-tsasatry ny seranam-piaramanidina ary manararaotra an'izany
Fampiroboroboana ny fizahan-tany amin'ny sarimihetsika: Aiza ny synergy?